Iibso Dumar Casual Split Leather Sneakers chunky White - Raridda bilaashka ah & Canshuur la'aan | WoopShop®
Dumarka Maqaarka Caadiga ah ee Jeex -jeex -jeexaya
$ 53.99 qiimaha joogtada ah $ 80.99
Color 2.5CM SOTTOM dhogor ma leh 4CM SOTTOM dhogor ma leh
Tirada kabaha 35 36 37 38 39 40 41 42 43
2.5CM SOTTOM ma leh dhogor / 35 2.5CM SOTTOM ma leh dhogor / 36 2.5CM SOTTOM ma leh dhogor / 37 2.5CM SOTTOM ma leh dhogor / 38 2.5CM SOTTOM ma leh dhogor / 39 2.5CM SOTTOM ma leh dhogor / 40 2.5CM SOTTOM ma leh dhogor / 41 2.5CM SOTTOM ma leh dhogor / 42 4CM SOTTOM ma leh dhogor / 35 4CM SOTTOM ma leh dhogor / 36 4CM SOTTOM ma leh dhogor / 37 4CM SOTTOM ma leh dhogor / 38 4CM SOTTOM ma leh dhogor / 39 4CM SOTTOM ma leh dhogor / 40 4CM SOTTOM ma leh dhogor / 41 4CM SOTTOM ma leh dhogor / 42 2.5CM SOTTOM ma leh dhogor / 43 4CM SOTTOM ma leh dhogor / 43
Dumarka Maqaarka Caadiga ah ee Kala -goynta ah ee Sneakers -ka cad - 2.5CM GABADH aan lahayn dhogor / 35 gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Maqaarka Sare: Maqaarka Kala -Go '
Waxyaabaha Liinanka: Sunta
Kabaha Platform Creepers: Sneakers White
Sida loo nadiifiyo: maro nus-qallalan tirtir dusha /fududahay in la nadiifiyo
Tilmaamo: Kordhi meel u dhow 3 cm
Si fiican loo soo buuxiyay. Ma urto, araggii horena wax dhaawac ahi ma jiro. Muuqaal ahaan, maqaar dhab ah. Si degdeg ah u yimid (todobaad iyo badh-laba). Ku dhawaaday cabbirka.
Kabo kabo heersare ah. Iyadoo cabbirka la qiyaasay. At 23-23,5 cm cag, on Ruush 36 amray Chinese 37. Waxay u timid si qumman. Sneakers ma aysan fariisan, laakiin in yar waxaa jira meelo loogu talagalay sharabaadyada dhumucdooda kala duwan, guud ahaan waxaa jira meel shan millimitir ah. Sneakers waa caddaan, nadiif ah, lugtu waxay u muuqdaan kuwo qurux badan. Raridda iyo keenista aad bay u degdegaysaa, kaliya waxay qaadatay toban maalmood. Marka la furayo ur aan fiicnayn ma ahayn. Ma jiro dun ama qulqulaya, tayada wax qabadku waa mid aad u fiican. Alaabtan iyo dukaankan ayaa hubaal ah inay ku talinayaan!
Kabo kabo wanaagsan, xoogaa adag. Way fiicnaan lahayd haddii aan qaato cabbir ka weyn, Dabada farta
Waxaan ka dalbanayaa lammaanaha labaad ee iibiyahan, 39-kayga waxaan qaataa Chinese 40. Bakhaarku wuxuu hadyad ahaan u dhigay maro-gacmeed. Si degdeg ah loogu geynayo goobta dhalmada